ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု | USAHello | USAHello
<span lang ="ar">ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု</span>
က်ဘ်ဆိုက်များ, Continue, social networking site များ
အသစ်သောလူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်သင်တစ်ဦးလူဝင်မှုသင်ကိုယ်တိုင်များမှာအထူးသဖြင့်အခါ, ကောင်းသောအရာကိုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကို Facebook နဲ့ Instagram နဲ့တူ social networking site များသင်သည်သင်၏နိုင်ငံ၏အသစ်သောအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုခံစားရကူညီပေးနိုင်ပါသည်, United States မှာအထီးကျန်ခံစားရပေမည်. ဒါပေမယ့်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်. သင်အန္တရာယ်များကိုနားလည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကှယျပေးနိုငျ. ဤတွင်လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့သတင်းအချက်အလက်င်.
လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအခါ, သငျသညျကိုမှန်ကန်ဘဝ၌သင်တို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်ပြုသောတူညီသတိထားအသုံးပြုသင့်ပါတယ်. ဤတွင်လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၌သင်ကူညီပေးရန်အခြို့သောအကြံပေးချက်များများမှာ.
သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓါတ်ပုံတွေအွန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့သူဌေးအဖြစ်မည်သူမဆိုအလောင်းအစားမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုချင်ပါတယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဘူး. သင်အနီးကပ်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူသာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအရာတစ်ခုခုလည်းမရှိတစ်ကြိမ်ပိုမိုကျယ်ပြန့် shared နိုင်ပါသည်. သင်ကအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတစ်ချိန်ကအခြားသူတွေကမိတ္တူရှိသည်ကြောင့်လည်း, သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရမရနိုငျ. အတော်များများကအင်တာနက်ပေါ်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ profile များကိုများ၏ပုဂ္ဂိုလ်များနှင်ထုတ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ရရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်.
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအကောက်အခွန်ဝိသေသလက္ခဏာသို့မဟုတ်ဘဏ်နံပါတ်များ, စကားဝှက်သို့မဟုတ်သင့်လိပ်စာကိုစကားလုံးများနှင့်နံပါတ်များအဖြစ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးဖို့လိုအပျမညျမဟုတျ. လူမှုကွန်ယက်သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစေရန်အသုံးပွုနိုငျသော privacy settings တွေကိုအများအပြားမဆံ့. တွင် အောက်ပါရိုးရှင်းလမ်းညွှန် လူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ privacy setting များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်မည်သို့မည်ပုံအကြောင်း.
အင်တာနက်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကအမြဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ဤစကားသည်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော password များရှိသည်ဖို့အကြံပြု. Ansahonna နှစ်နိုင်ငံ authentication ကို အသုံးပြု. အဖြစ် (လော့ဂ်မှ additional ခြေလှမ်းများ) ဒါမှမဟုတ် password ကိုမန်နေဂျာ. သင်ဒီမှာ passwords များကိုမန်နေဂျာများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.
သူတို့သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝေရန်အခါအစစ်အမှန်လောကရှိသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးစဉ်းစားပါ. သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လိပ်စာရဖို့လိုအပ်တယ်, ပြီးတော့သင်ပယ်ရှင်းဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအကြောင်းကြားရန်အားလပ်ရက်ဓါတ်ပုံတွေကိုထုတ်ဝေကြဘူး. အားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သင်၏မိသားစုအနေဖြင့် Facebook တွင်ထုတ်ဝေခဲ့လျှင်လူတွေဟာသင့်အိမ်သည်အလွတ်ဖြစ်သည်သိရကြလိမ့်မည်.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တခါတရံတွင်သင်သည်သင်၏တည်နေရာသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်စေခြင်းငှါ “ရန် access ကို” သောနေရာများ. သငျသညျဤအမှုကိုသို့မဟုတ်မပြုလုပ်သင့်ရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပါ.
လူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အဘို့အလူမှုမီဒီယာလွယ်ကူသော Make. အွန်လိုင်း, သူတို့တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအငျတာနကျပျေါတစ်စုံတစ်ဦးကိုခေါ်ပါက, သင်သည်သူတို့နေသောကိုသိမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးတည်းကြောင့်လူတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အိမ်ပြန်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်သို့ဖုန်းဆက်ဖို့စီစဉ်မနေပါနဲ့. အမြဲတမ်းလူထုအရပျ၌သူစိမ်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသည့်အခါသင်တို့ပတ်လည်အခြားလူများရှိပါတယ်.
ကျနော်တို့လူတွေလှည့်ဖြားဖို့လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုလေ့လာ. ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်များ၏တွေအများကြီးမမှန်ကန်. တခါတရံမှာလူတွေဟာတစ်ဦးလူမှုကွန်ရက်ကိုမှန်ကန်လူတွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, မကြာခဏအမှုအရာမှာအားလုံးစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်. ဤရွေ့ကားပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအမည်များဖြစ်နိုင်သည် “ဘိနပ်” (စက်ရုပ်အတု). တစ်ဦးကအစိုးရအရာရှိတဦးကသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရာရှိတဦးထံမှဖြစ်သယောင်ဟန်ဆောင်အတုသတင်းအစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်သည်.
သူတို့ပြောသကဲ့သို့သူတို့ဖြစ်ကြောင်း 100% သေချာမသိကြရသောအခါအဘယ်သူကိုမျှရန်ပိုက်ဆံမပို့ပါနဲ့. အမျိုးပျက်သောဘဏ်အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ပိုက်ဆံမပို့, ထိုကဲ့သို့သော Microsoft ကအဖြစ်အစိုးရထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန် IRS ကိုအဖြစ်ရုံးများ, နှင့်စစ်မှန်သောစီးပွားရေး, ပြောပြမနေပါနဲ့. ဘာမှအဘို့သင့်စကားလုံးမမေးမနေပါနဲ့. အွန်လိုင်းမည်သူမဆိုရန်သင့်စကားဝှက်ကိုမပို့ပါနဲ့.
ရန်လိုသောသို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့ Allatifin ကလူကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ
ဒါဟာဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းရန်လိုသောသို့မဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလူပစ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ,. ချစ်ကြည်ရေးတောင်းဆိုမှုများကိုသင်မသိသောလူမျိုးသည်ထံမှလက်ခံခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်. ချက်ချင်းသင်၏အကောင့်ကိုမဆိုခြိမ်းခြောက်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုထုတ်ဝေသူကိုမဆိုလူတစ်ဦးပိတ်ဆို့. ကိုတုံ့ပြန်မနေပါနဲ့. အမှုအရာမရေးပါ စကားလုံးသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်သင်ပိုမိုပစ်မှတ်စေ. ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအပါအဝင်ရဲနှင့်ထို site နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုများ, တိုင်ကြားရန်.
Scan ကို့ hacker ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ
သူတို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှလာလျှင်ပင်ကြောင့်သင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်သလင့်များကို click မနေပါနဲ့ (သင်သည်ထိုအန္တရာယ်များတဲ့ link ကိုမသိစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြပေမည်). ကိုယ့်ကိုဖျက်. ဒီလမ်းထဲမှာသင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာမှလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. မလိုအပ်ခဲ့ကြသောလင့်များသင့်ရဲ့ခိုးယူသင့်အချက်အလက်များကိုနှင့်သင့်ပိုက်ဆံနှင့်သင့်ရဲ့အထောက်အထားအတွက်သင့်ကွန်ပျူတာကိုပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်ကလူကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဗိုင်းရပ်စ်ဆံ့ကြောင်းဖွယ်ရှိ. ထိုအဆိုကမ်းလှမ်းမှုဒါမယုံနိုင်စရာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောပုံရသည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့! သင်မသိသောတစ်စုံတစ်ဦးထံမှငွေအများကြီးရလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိပါက delete!
သူတို့ကိုဂရုစိုက်သူကိုလူတို့နှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအရေးမပါအရာအဘို့အရှာဖွေရေးအပေါ် Tngers နာရီမဖြုန်းပါနဲ့. လူမှုရေးကွန်ရက်များစွဲသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်မိမိတို့၏ကုမ္ပဏီများနှင့်၎င်းတို့၏ applications များဆကျသှယျဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်. ဒါကြောင့်ငွေရှာ.
သငျသညျလူမှုရေးဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်နားလည်မှုရဲ့နည်းလမ်းမသုံးကြဘူးဆိုရင်တောင်သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံသင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကြောင်းအလုံအလောက်သိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုပါက, အင်တာနက်ပေါ်ရှိသူတို့ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ချပြီးမသင်တို့၏သားသမီးကာကွယ်ပါ. သငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာကိုမသုံးထားဘူးဆိုရင်သူတို့ကအသုံးပြုတဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်. သင်၏သားသမီးမေးဖို့. သူတို့ကအနိုင်ကျင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်း, မကောင်းတဲ့ကြော်ငြာများ၏အကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့နိုင်ပါသည်. ဤတွင်အချို့ အွန်လိုင်းသင်၏သားသမီးကာကွယ်အကြောင်းကိုကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များ. ဒါဟာလုံခြုံကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပေးချက်များပါဝင်သည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာများ၏သတိထားဖြစ် lists.
အတော်များများကနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများသာစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်သင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု. နုပျိုကလေးများဆွဲဆောင်အကြံပြု. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်နှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အရှိဆုံးကျွမ်းကျင်သူများကညဥ့်အချိန်တွင်သားတို့သည်မိမိတို့ခန်းထဲမှာစမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမပေးအကြံပြု.
အင်တာနက်ကိုကျော်နှောင့်ယှက်ဖို့ exposure ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဤသည် e-နိုင်ကျင့်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အွန်လိုင်းကအခြားဆယ်ကျော်သက် Mottagsidin လိုက်တဲ့အခါ. သင့်ရဲ့လေးတွေနှောင့်ယှက်ပါလျှင်, မေးခွန်းထုတ်ခံရမဟုတ်အနိုင်ကျင့်. ဒီ website အီလက်ထရောနစ်နှောင့်ယှက်ပါရှိသည် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အသေးစိတ်အကြံပေးချက်များ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်စာရွက်များအပါအဝင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများစောင့်ကြည့်.
လူမှုထိုကဲ့သို့သောတခြားသူတွေနဲ့ဖော်ရွေလုပ်ငန်းများနှင့်အပြန်အလှန်အဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုမှဆက်စပ်ဘာမှဆိုလိုတယ်. မီဒီယာအလယ်စကားလုံးပုံစံ, ချန်နယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုသို့မဟုတ်အင်တာနက်အဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေးဆိုလိုမှမီဒီယာကိုသုံးပါ.
လူမှုရေးကွန်ရက်များကွန်ရက်များသို့မဟုတ်အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်. လူမှုရေးကွန်ရက်နှင့် Facebook အပါအဝင်, တွစ်တာ,Snape Gat နှင့် Instagram ကို – မည်သည့်
သင်သိလူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသို့မဟုတ်မသိသောအရာကိုအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်. LinkedIn တို့တစ်လူမှုကွန်ယက်များကဲ့သို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်အလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းအဘို့. အခန်းပေါင်းနှင့်ဆိုဒ်များ chat(ပွနျလညျသငျ့)ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အခြားပုံစံများ Are. မည်သူမဆိုရှိဗီဒီယိုများနှင့်မှတ်ချက်များထုတ်ဝေရန်နိုငျသောကွောငျ့တောင်မှ Youtube, လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူတွေသင်သည်ခိုးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ social media အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်. သင်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကြိုးစားကြစေခြင်းငှါ. သင်သိနှငျ့သငျအစစ်အမှန်အသက်တာ၌သိကြပုံကိုသင့်ရဲ့အပြုအမူလူတို့နှင့်အတူစဉ်းစားအတွက်အန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်တလမ်းတည်းဖြင့်. သင်သိသောသူတို့အားနှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပြောဆို – သူတို့ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအကြောင်းကိုအရာရာပြောပြမသိရပါဘူးသို့မဟုတ် To.la အံ့သောငှါစည်းဝေးကြသူလူများနှင့်သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ Almqrbin.kn ပိုပြီးသတိထား. သူတို့ကိုကိုယ်ငွေသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ကသော့ကိုမပေးပါဘူး. လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဤချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပါလည်းဖြစ်ပါတယ်.